Abakhiqizi be wall bay nabahlinzeki - China wall bay Factory
Indawo yethu yefektri ingamamitha-skwele angama-42000, futhi sinomnyango we-R & D nonjiniyela abangama-20, indawo yokusebenzela yezinkuni, i-workshop yensimbi, i-workshop yepulasitiki, i-workshop yezinhlungu, i-PC workshop kanye ne-3 yokugcina. I-QC ilawula yonke inqubo kusuka ekufinyeleleni kokubonakalayo kuya ekulethweni kwemikhiqizo. Kufanele waneliswe ngekhwalithi yethu. I-workshop ikhiqiza ngokuqinile ngokwesheduli, ngakho-ke yonke i-oda ingalethwa ngesikhathi.
Izingubo zokubonisa zokubeka